Free Software, Shearing Knowledge , Ebook, Free Premium Account, Programming, tutorials,Android Root, Android app
Android Roots လုပ်နည်းများ
Free Software, Shearing Knowledge , Ebook, Free Premium Account, Programming, tutorials,Android Root, Android app.
Free Software, Shearing Knowledge , Ebook, Free Premium Account
Programming, tutorials,Android Root, Android app
Posted in I Mobile
I Mobile ဖုန်းမှာ
ထုံးစံအတိုင်းပဲ V root နဲ့ကစ်ပါတယ်
ဒီကောင်လေးနဲ့ ကစ်လိုက်ရင် အဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်။
Nokia X မြန်မာဖောင့်သွင်းနည်း
Nokia X andriod ကို
V root နဲ့ ကစ်လိုက်ပါ
ဘာနဲ့ ပဲ ကစ်ကစ်မရဘူး
Smart Zawgyi Pro နဲ့
Facebook ကဲ့သို့ လူမှုကွန်ယက်ကို မြန်မာပြည်က မြန်မာဘာသာဖြစ် စတင်ပြုလုပ်လိုက်ပါပြီ
MySocial for Andriod
My Social Application လေးကို http://mysquar.com/ ကထုတ်လုပ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။
ဒီ Application ကိုအသုံးပြုပြီး
မြန်မာဘာသာစကားအသုံးပြုထားတဲ့ လူမှုကွန်ယက်မှာ သူငယ်ချင်းအသစ်တွေရှာကြမယ်
မြန်မာပြည်ရဲ့ ရှေ့ဆောင် လူမှုကွန်ယက်!
MySocial ဆိုတာ သူငယ်ချင်းအသစ်တွေနဲ့ တွေ့ဆုံဖို့၊ သတင်းအချက်အလက်တွေဖလှယ်ဖို့ နဲ့ စိတ်ဝင်စားစရာအကြောင်းအရာများကို ဝါသနာတူသူငယ်ချင်းများအချင်းချင်း နှီးနှောဖို့ရန် အကောင်းဆုံးနေရာလေးဖြစ်ပြီး မြန်မာဘာသာနှင့် အခမဲ့အသုံးပြုနိုင်သော မြန်မာ့ လူမှုကွန်ယက်ဖြစ်ပါသည်။
စိတ်ကြိုက် ပို့စ်များကိုအခမဲ့ရေးသားနိုင်ခြင်း၊ တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး ဆက်သွယ်နိုင်ခြင်း
ပိုစ့်များ ပုံများ၏အောက်တွင် အကြောင်းပြန်နိုင်ခြင်း၊ ဝေမျှနိုင်ခြင်း၊ ကြိုက်ကြောင်း ပြသနိုင်ခြင်း
MySocial မှသူငယ်ချင်းများနှင့် ချက်တင်ပြောနိုင်ခြင်း
Bug များကိုပြင်ထားပြီး ပိုမိုကောင်းမွန်အောင်ပြုလုပ်ထားခြင်း
ဘေးတန်းက UI ကိုပြင်ဆင်ထားခြင်း
Android OS ၂.၃.၅ တွင်သုံးနိုင်အောင်ပြုလုပ်ထားခြင်း
Play Store မှ ဒေါင်းဖို့ ခက်နေသူများအတွက်
Credit to: http://mysquar.com/apps/mysocial/
Cheon Korea-Myanmar-Korea Dictionary
Posted in Korea-Myanmar-English Dictionary
ကိုရီးယားစကားနဲ့ ကိုရီးယာစာကို လေလာနေတဲ့သူတွေနဲ့ ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာ အလုပ်လုပ်ကိုင်းပြီး ဘာသာစကား အခက်အခဲရှိသူများအတွက် အဆင်အပြေဆုံး Dictionaryလေးပါ။ လုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာပဲဖြစ်ဖြစ် အပြင်ထွက်တဲ့အခါမှာပဲဖြစ်ဖြစ် မသိတဲ့စကားလုံးများကို ရှာဖွေနိုင်ပါတယ်။ အသုံးပြုပဲုကတော့ အရင်ဆုံး Register အရင်လုပ်ရပါတယ်ဗျာ…………
ဒေါင်းနည်းမသိသူများ adf ရောက်လျှင် ညာဘက်အပေါ်နားမှ Skip AD ကိုနိုပ်ပါ
အားလုံး အလုပ်ခွင် ဝင်နေတဲ့သူပဲဖြစ်ဖြစ် စာလေ့လာနေတဲ့ သူပဲဖြစ်ဖြစ် အဆင်ပြေချောမွေ့ပါစေလို့ ဆုတောင်းလျက်
Huawei G-730 မြန်မာဖောင့် Fix apk
Huawei G-730 မှာမြန်မာစာမပေါ်တာကို Smart Zawgyi Proနဲ့အစားထိုးပြီး Fix လုပ်ပေးထားတယ်…………
Samsung Pattern Remove (No Root , No Usb Debug)
Pattern lock ကျနေပြီး root မရှိ usb debug မဖွင့်ထားမိလို့ အခက်အခဲဖြစ်နေတဲ့သူငယ်ချင်းအတွက် ဆော့ဝဲလ်လန်းလန်းလေးတစ်ခု ပြန်လည်မျှဝေပေးတာဖြစ်ပါတယ်။
Samsung အတွက်တော့အဆင်ပြေပါတယ်။တခြားဖုန်းတွေကိုလည်း စမ်းကြည့်စေချင်ပါတယ်။
Zaw gyi မြန်မာဖောင့် Version 4.3အထိပါ။ rootလုပ်စရာမလိုဘဲထည်နိုင်ပါတယ်။
ဇော်ဂျီဖောင့်ဟာ android version 4.2.2ကနေစပြီးသုံးလို့မရတော့ပါ။Rootဖောက်ပြီးမှသာအသုံးပြုနိုင်ကြတယ်။rootဖောက်ပြီးတာတောင် font ပုံစံတွေပြောင်းလဲလိုမရတော့ပါဘူး။ အခုပြသာနာကိုဒီဖောင့်လေးများကဖြေရှင်းပေး နိုင်ပါတယ်။ ကြိုက်နှစ်သက်ရာကိုထည်သွင်းအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ samsung ဖုန်း
တွေအတွက်အဓိကထားလုပ်ဆောင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။တစ်ခြားဖုန်းတွေ ကိုတော့စမ်းသပ်ခြင်းမပြုလုပ်ရသေးပါဘူး။ ကျွန်တော်စမ်းသပ်ထားတာတော့version 4.3အထိဖြစ်ပါတယ်။ ဖောင့်ပုံစံလေးတွေပြောင်းပြီးလန်းလိုက်ကြရအောင်ခင်ဗျာ။
notifaction မပေါ်တဲ့ error နှင့် setting notifaction မိန်နေတဲ့ error ရှင်းကြမယ်
Posted in Android Error
ဖုန်းကို Root လုပ်ထားပြီး Root explorer install လုပ်ထားပါ။ root explorer ဖွင့်ပြီး Super user permission allow ပေးပါ။
Root explorer အောက်က data ကိုဖွင့်ပါ။
custom.bin ထဲဝင်ပါ။ test view ထဲကို ဖွင့်ကြည့်ပြီး နာမည်ကိုမှတ်ထားပါ။
rw ကို ro ပြောင်းထားပါ။ cust ကို ၀င်ပြီး rw ကိုလည်း ro ပြောင်းထားပါ။
chinatelecom ကို Test View မှာ ကြည့်ပြီး မှတ်ထားတဲ့ နာမည်ရှေ့စာလုံးကို rename အဖြစ်ပေးပါ့မည်။
နောက်စာလုံးကိုတော့ chinaelcom နေ ခုလက်ရှိ နာမည်ပြောင်းထားပေးတဲ့ အောက်ထဲထပ်ဝင်လိုက်ပြီး cn ကို test view မှာ မှတ်ထားတဲ့ နောက်နာမည်တစ်ခုကို ထပ်ပြီး နာမည်ပြောင်းပေးပါ။
ပြီးရင် ဖုန်းကို setting ထဲက Factory reset ချပေးလိုက်ပါ။ ပြန်တက်လာရင် noti ပျောက်နေတဲ့ error ကို ရှင်းတာ အောင်မြင်သွားပါပြီ။
cust အောက်က chinatelecom ဆိုတဲ့ နေရာမှာ နာမည်ချိန်းဖို့ test view မှာဝင်ကြည့်တာပါ မျဉ်းစောင်းခံပြီးရေးထားတဲ့အတွက်
ပထမစာလုံးကို chinatelecom နေရာမှာ ထည့်ပြီး သူထဲက cn ဆိုတဲ့နေရာမှာ မျဉ်းစောင်းနောက်က စာကို rename ချိန်းပြီး factory reset လုပ်ပေးလိုက်တာပါ ပြန်တတ်လာရင် Noti ပြန်ပေါ်လာပါပြီခင်ဗျာ။
Test View = mpt/mm
Chinatelecom = mpt
data/custom.bin အောက်က test view ကိုရင်ဖွင့်ကြည့်ပြီး နာမည်မှတ်ပါတယ်။
cust အောက်ထဲက Chinatelecom ကို mpt ပြောင်းပါတယ်။
Chinatelecom အောက်က cn ကို mm ပြောင်းပေးပြီး Factory reset ချပေးပါ ။ ပြန်တတ်လာရင် အဆင်ပြေပါပြီးခင်ဗျာ။
တွေ့ရှိထားသူအားလုံးကို credit ပေးပါတယ်
kinemaster ဆိုတဲ့ video maker apkလေးပါ
အောက်က link မှာယူနိုင်ပါတယ်
adf.ly ရောက်ရင် ညာဘက်အပေါ်ထောက်နားမှာ Skip AD ကိုနှိုတ်လိုက်ပါ
Career Doller မှာ ပိုက်ပိုက်ရှာရအောင်ဗျာ...
Posted in Money Generat
Career Doller Register လုပ်တာနဲ့ချက်ချင်း ၃၀ ဒေါ်လာရပါမယ်။ ၃၀ စက္ကန့် Task ကိုဖြေလို့အောင်ရင် 10$ ရပါမယ်။
referral လုပ်ရင် ၁၅ဒေါ်လာရပါမယ်။ နှိပ်တာနဲ့ ၁၀ ဒေါ်လာရပါမယ်။ ဒေါ်လာ ၃၀၀ ပြည့်ပြီဆိုရင် Western Union ကနေလွှဲပေးပါမယ်တဲ့။
Adobe ( 1 ) Adobe Photoshop ( 1 ) Adobe Photoshop Plugin (4) All Premium Account (3) Android (2) Android app (6) Android Error (2) Android Firmwares ( 11 ) Android Internet Setting ( 1 ) Android Rom Collection ( 1 ) Android Root (6) Android Tools (3) Antivirus Full version ( 1 ) AOI Tools ( 1 ) AVIRA (2) Converter ( 1 ) Design Tool ( 1 ) Desktop Bar (2) Download Tools (5) Ebooks (4) FACEBOOK ( 1 ) Games (2) Graphics (3) Huawei ( 1 ) Huawei Firmwares ( 1 ) I Mobile ( 1 ) Icons ( 1 ) Internet Tools ( 8 ) IP (3) Kaspersky ( 11 ) Korea-Myanmar-English Dictionary (2) Laptop Drivers (3) Link Generator (3) Locker ( 1 ) Microsoft Office Tools ( 1 ) Miscellaneous (3) Money Generat (2) NEWS (2) Nokia ( 1 ) Notepad ( 1 ) Operating System ( 13 ) Programing Ebooks (5) Programming (2) Proxy (2) Remover Tools (4) Repairing Tools (2) Ringtone ( 1 ) Samsung (2) Shortcut Commands ( 1 ) Sony ( 1 ) Themes (2) Ubuntu ( 1 ) Unistaller ( 1 ) USB Tools ( 1 ) Video Editing Softwares ( 1 ) Virtual Drive (2) Virus Protect (3) Web Design Tools ( 1 ) Wifi ( 1 ) WIFI HACKING ( 1 ) WINDOW7(4) Window 8 (4)
Huawei Ascend G730 C00, T00, U00 Firmware များ
Korea-Myanmar-English စကားပြော apk
Samsung Official Firmware (Mediafire)
Huawei C8813, C8813D နဲ့ G510-0010 Root လုပ်နည်း
Huawei Y310 ကို Root ဖောက်လို့ သေသွားတဲ့ Touch error ကို ရှင်းမယ်
Ascend-G302D-[U8812D] Firmware နှင့် Ascend-G330D-[U8825D] Firmware
Adobe Photoshop CS6 & Serial Numbers
Huawei G730-C00 Network Unlock နဲ့ Font ထည့်လို့ရတဲ့ .bat File
Sony Firmware များ Collection
Most Popular Blog List
All Working premium Link Generator
Copyright © 2013 Free Software Download . and bgadget
Adobe Photoshop Plugin 4
All Premium Account 3
Android Error 2
Android Firmwares 11
Android Internet Setting 1
Android Rom Collection 1
Android Root 6
Android Tools 3
Antivirus Full version 1
AOI Tools 1
Desktop Bar 2
Download Tools 5
Huawei Firmwares 1
Internet Tools 8
Korea-Myanmar-English Dictionary 2
Laptop Drivers 3
Link Generator 3
Microsoft Office Tools 1
Money Generat 2
Operating System 13
Programing Ebooks 5
Remover Tools 4
Repairing Tools 2
Shortcut Commands 1
USB Tools 1
Video Editing Softwares 1
Virtual Drive 2
Virus Protect 3
WIFI HACKING 1
WINDOW74
Operating System ( 13 ) Android Firmwares ( 11 ) Kaspersky ( 11 ) Internet Tools ( 8 ) Android app (6) Android Root (6) Download Tools (5) Programing Ebooks (5) Adobe Photoshop Plugin (4) Ebooks (4) Remover Tools (4) WINDOW7(4) Window 8 (4) All Premium Account (3) Graphics (3) IP (3) Laptop Drivers (3) Link Generator (3) Miscellaneous (3) Virus Protect (3) AVIRA (2) Android Error (2) Desktop Bar (2) Games (2) Money Generat (2) NEWS (2) Programming (2) Proxy (2) Repairing Tools (2) Themes (2) Virtual Drive (2) AOI Tools ( 1 ) Adobe ( 1 ) Adobe Photoshop ( 1 ) Android Internet Setting ( 1 ) Android Rom Collection ( 1 ) Antivirus Full version ( 1 ) Converter ( 1 ) Design Tool ( 1 ) Icons ( 1 ) Locker ( 1 ) Microsoft Office Tools ( 1 ) Notepad ( 1 ) Ringtone ( 1 ) Shortcut Commands ( 1 ) USB Tools ( 1 ) Ubuntu ( 1 ) Unistaller ( 1 ) Video Editing Softwares ( 1 ) WIFI HACKING ( 1 ) Web Design Tools ( 1 ) Wifi ( 1 )
Adobe Adobe Photoshop Adobe Photoshop Plugin All Premium Account Android app Android Error Android Firmwares Android Internet Setting Android Rom Collection Android Root Antivirus Full version AOI Tools AVIRA Converter Design Tool Desktop Bar Download Tools Ebooks Games Graphics Icons Internet Tools IP Kaspersky Laptop Drivers Link Generator Locker Microsoft Office Tools Miscellaneous Money Generat NEWS Notepad Operating System Programing Ebooks Programming Proxy Remover Tools Repairing Tools Ringtone Shortcut Commands Themes Ubuntu Unistaller USB Tools Video Editing Softwares Virtual Drive Virus Protect Web Design Tools Wifi WIFI HACKING WINDOW7Window 8